Izizathu ezifanelekileyo zokuba kwiPinterest | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lua louro | | Ukuphefumlelwa, Tutorials
Apha ubona lonke unxibelelwano nezikhonkwane zakho: ngubani okushicilele kwakhona, okulandelayo ...
Nangona ibhalwe njengonxibelelwano lwentlalo, ndikhetha ukuyicinga njengealbhamu enkulu yokuphefumlelwa. Kuba okwangoku, ukuthetha ngenethiwekhi yokunxibelelana kunxulunyaniswa neziqhulo nokwazi ngamaxesha onke ukuba "umhlobo" wenzani. Y Twilley ayinanto yakwenza nalo mbono.
Ngoku ukusebenza kwilifu kunye nokwenza izixhobo ngokufanelekileyo kuthatha ixesha elide, Twilley uye wanyathela kwaye wajoyina iqonga ekwabelwana ngalo noFacebook noTwitter.
Kuyinyani ukuba uninzi lwenethiwekhi ziyavela, kwaye oko kubangela ukwaliwa xa ungena kuzo. Sigcwaliswe ngandlela thile nguFacebook noTwitter (mhlawumbi kungenxa yendlela esibaphatha ngayo) kwaye sele sicinga ngendawo yesithathu okanye yesine ekufuneka ibekhona, isenza isiyezi. Kubo bonke abantu abanqwala iintloko ngoku, yithi HAYI.
HAYI ukwala okucwangcisiweyo kwePinterest ngaphandle kokuphonononga kwaye uzibuze ukuba yintoni na. Ukuba awufuni ukuba kwinethiwekhi yokuncokola, cima nje leyo engakuniki enye into ngaphandle kwentloko.
IPinterest sisisombululo esifanelekileyo kuye nabani na othanda ukugcina imifanekiso kwaye asebenze nabo. Isetyenziselwa abafoti, abenzi bemifanekiso, amagcisa, abayili, abakroli ... Kodwa nakwabathandi bezokhenketho, ukhenketho, iincwadi, izityalo, izilwanyana, ubugcisa ... Ukuba unomdla wokuzonwabisa, yiba nePinterest!
1 Izizathu zokuba
2 Kulungile, ndifuna ukuba kwiPinterest. Amanyathelo okuqala
3 Yintoni iPinterest? Iingcamango ezisisiseko
4 Imibuzo ebuzwa rhoqo xa uqala kwiPinterest
Nciphisa i-hard drive yakho.
Ngaba unamakhulu eefolda apho ugcina khona imifanekiso kunye nemisebenzi oyithandayo? "Zenzele iPinterest" kwaye uyeke ukuhlala kwiigigabytes zililize.
Yenza ukuhamba komsebenzi kube lula ngakumbi.
Ngokwandisa indawo yasimahla kwihard drive yakho, ikhompyuter yakho iya kusebenza ngokukhawuleza (kwaye nawe).
Khuthaza ubuchule bakho.
Ukubona italente engaka kuya kukuchaphazela xa kuziwa ekudaleni: nokuba uyayifuna okanye awuyifuni.
Ikugcina uhlaziywa kwiindawo ezinomdla wakho.
Ngokuhlaziyiweyo ngokupheleleyo: Uya kuyazi ukuba yeyiphi imikhwa yobuhle ukuba ujonga ngokusondeleyo.
Iyakukhuthaza xa uyifuna.
Ukuba uyafuna, uyayibona. Kwaye ukuba akunjalo, ayikukhathazi ngeentengiso ezingafunekiyo.
Khuthaza ukuhleba okuvelisayo.
Yintoni na ukuba uthanda Maria? Wowu! Ngaba unomdla omnandi. Ndiyayithanda ibhodi yakho yoyilo.
Kulungile, ndifuna ukuba kwiPinterest. Amanyathelo okuqala
Ngokukhawuleza xa singena kwiwebhusayithi yePinterest, into yokuqala abasixelela yona yile:
Bhalisa nge-Facebook: ukufikelela ngoku kwiakhawunti yethu.
Bhalisa kunye nedilesi ye-imeyile: kuba awunyanzelekanga ukuba ungene kuFacebook.
Nokuba yeyiphi kwezi ndlela zimbini kulula ukuzenza, kuya kufuneka ulandele amanyathelo abonisiweyo.
Nje ukuba ugqunywe, uya kufumana ibhokisi yencoko yababini ekhokelwa sisicatshulwa "Landela iibhodi ezi-5 ukuze uqalise”. Ngasekhohlo, umbuzo "Ziziphi izinto onomdla kuzo?", Kwaye ngaphantsi kwayo kuthotho lwamagama aphambili. Ewe, khetha enye kwaye ucofe ku "ukulandela”Ubuncinane ezintlanu. Emva kwexesha ndiza kuchaza ukuba zeziphi iibhodi, kuthetha ntoni ukulandela, njl. Cofa Okulandelayo.
Ngoku uya kuba nephepha lakho lasekhaya kwi Twilley, ngebhokisi yencoko yababini encinci ethi: "Siyakwamkela kwiPinterest! Sithanda ukukwamkela! Apha uya kufumana ukhenketho olukhokelwayo ukuze uqalise.”Cofa apha Phuma kwaye ulandele isikhokelo. Sele ubhalisile!
Yintoni iPinterest? Iingcamango ezisisiseko
I-PIN: umfanekiso okwiPinterest.
IPLANGI / IBHODI: yifolda equlathe isikhonkwane esinye okanye ezingaphezulu.
I-PINEAR: isenzo sokuguqula umfanekiso ojikeleza kwi-Intanethi ube yi-PIN siyaziwa.
Phinda ucacise: yenzeka xa ufuna iPIN evela komnye umsebenzisi ukuba ibe kwiPLANK yakho.
Masiqale ngokuchaza iphepha lasekhaya lasePinterest, xa sele ungene. Isikrini sakho sahlulwe ngokuthe tye kwiindawo ezimbini: ephezulu, enebar yokuhambisa encinci; kwaye esezantsi.
TOP: apha uza kuya xa ufuna ukukhangela imifanekiso kwisihloko esithile, ngesandla faka ipini ebanjwe kwikhompyuter yakho, jonga iibhodi zakho, ufumane abanye abahlobo abakwiPinterest, bona unxibelelwano lwamva nje abanye abasebenzisi ababenalo izikhonkwane zakho, njl.
NGAPHANTSI: iya kuhlala igcwele izikhonkwane. Iipini nganye ingaphakathi koxande eyahlulwe kubini: umfanekiso uvela kwinxalenye ephezulu, kunye nedatha ehambelana nayo (inkcazo, ethe yaphakanyiswa ngubani kwaye ngubani oyiphindileyo) iyavela.
Imibuzo ebuzwa rhoqo xa uqala kwiPinterest
Ndibone ifoto emnandi kakhulu kwiwebhusayithi, ndiyenza njani "ukuyicofa" ukusuka apho?
Ewe, unokukhetha ezimbini. Yenze ngendlela INCWADI: yiya phezulu kwiphepha lasekhaya lePinterest yakho kwaye ucofe uphawu, + emva koko "Yongeza kwiwebhusayithi". Apha kufuneka uncamathisele idilesi yewebhu yomfanekiso ofuna ukuwukhonkotha.
Yenze ngendlela NGOKUZENZEKELAYO/ ukhululekile / ukhawuleze: yongeza iqhosha "lephini" ngqo kwisikhangeli sakho. Jonga iphepha lePinterest elithetha ngalo amaqhosha okucofa kwaye ufake ehambelana (ndisebenzisa uGoogle Chrome). Nje ukuba ufake, ekuphela kwento ekufuneka uyenzile kukuya kwiphepha apho umfanekiso ofuna ukuwukhonkxa ukhona kwaye ucofe iqhosha lePinterest osandula ukulifaka.
Ndiyenza njani ibhodi? Yenzelwe ntoni?
Iiplanga zisetyenziselwa ukulungiselela izikhonkwane zakho (imifanekiso) ngendlela efanelekileyo kakhulu kuwe. Kuqhelekile ukufumana iikhonsepthi ngokubanzi ngamagama ebhodi: ukufota, umzekeliso, imfashini, ukupheka ... Ingcebiso yam kukubalula kangangoko unakho. Ukuba uceba ukucofa ukufota kuphela, eyona nto icetyiswayo yeyokuba wenza ibhodi yokufota umhlaba, ukufota kwezentlalo, ukufotwa kwezemidlalo ... Ukuze uye "kwinqanaba" xa ufuna ukufumana uhlobo oluthile yomfanekiso. Khumbula ukuba ugcina imifanekiso ukuze uyisebenzise mva, ingenzi isiphithiphithi.
Ukwenza ibhodi, yiya phezulu kwiphepha lakho lePinterest kwaye ucofe kwigama lakho lomsebenzisi. Emva koko uye "kwiibhodi zakho". Apha ngezantsi kolwazi lweprofayile yakho, uyakuba noxande ngasekhohlo othi "Yenza ibhodi."
Ndimlandela njani umntu?
Zininzi iindlela "zokulandela umntu" kwiPinterest. Ngapha koko, ukulandela umntu akuthethi nto ngaphezulu kokwazi zonke izikhonkwane zabo. Ngokukhawuleza xa ungeze ipini kwi-akhawunti yakho, iya kubonakala kwiphepha lakho lasekhaya lasePinterest. Ke ... ungamlandela njani? Kwiphepha lasekhaya, kwicala lasekhohlo, unendawo ecebisa ukuba "Abahlobo onokubalandela". Cofa ku Landela phantsi kwegama labo kwaye… Yenziwe! Ukuba awufuni ukubalandela aba bantu kodwa unganomdla wokulandela abanye abahlobo bakho kwiinethiwekhi zonxibelelwano nabanye, cofa kwiqhosha elikuloo ndawo ithi "Khangela abahlobo abaninzi ". Apho uya kubona bonke abo ubongeze kuFacebook nakuTwitter.
Ungathini xa ufuna ukulandela umntu ongamaziyo? Akhongxaki. Cofa uqhubeke kwaye yiyo lonto.
Andifuni ukulandela zonke iiplanga zomntu, ndenze njani?
Kuya kufuneka ungene kwi "profile" yakhe. Ukwenza oku ngokunqakraza kwigama labo: phezulu, uya kuba neenkcukacha zabo; emazantsi, izikhonkwane zayo. Ukuba ujonga, kanye kule nxalenye, kukho iqhosha elibomvu elithi "Landela zonke iibhodi". Ngokucacileyo, sukucofa apho. Ngoku uza kubona ibhodi nganye, kwaye ngaphantsi kwayo, iqhosha elibomvu Landela. Ukuba ulandela le bhodi, elo qhosha liya kubonakala lingwevu. Ukuyeka ukuyilandela, cofa kuyo, kwaye iya kubomvu.
Ndifuna ukufumana imifanekiso enxulumene nolwandle kwiPinterest, ndenza njani?
Ngasekhohlo phezulu kwiphepha lakho lasekhaya, apho lithi Khangela, ngenisa igama elithi "ulwandle" (umzekelo) kwaye ucofe kwiglass (okanye faka ikhibhodi yakho). Ngoku jonga ibha engwevu ngaphezulu kwezikhonkwane: hlela ukhangelo lwakho ngokweziKhonkwane, iiBhodi kunye neePincers. Ukuba ukhangela kwizikhonkwane, uya kufumana imifanekiso nganye (izikhonkwane ezizodwa) ezinegama elingu-Beach. Ukuba ukhangela kwiibhodi, uya kufumana iibhodi ezinegama lolwandle (Oko kukuthi, amaqela emifanekiso agcinwe kwibhodi egama linjalo); Kwaye ukuba ukhangela iPinadores, uyakufumana abasebenzisi bePinterest ogama linguPlaya.
Ukusuka apha, yongeza ipini ngesandla
Fikelela iprofayile yakho ngokunqakraza "kwiibhodi zakho"
Iinkcukacha ezithe xaxe - Twilley, Phina amaqhosha
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » I-Pinterest: izizathu ezilungileyo zokuba
Ukuhlaziya i-Wordpress 3.6 kunye nengxaki: ewe okanye hayi?